विभेद जितेर ब्ल्याक बेल्ट |
विभेद जितेर ब्ल्याक बेल्ट
प्रकाशित मिति :2018-08-19 12:28:37
काठमाडौं वानेश्वरको एक विद्यालय जहाँ सेतो पोशाक लगाएका केटाकेटीहरु मुक्कामुक्की गरिरहेका थिए । स्कूलबाट फर्किरहेकी १२ वर्षकी बालिकाले देखिन् ।
‘एक आपसमा किन लडिरहेका होलान् ? ठूलै झगडा पो परेछ कि ?’ मुक्कामुक्कीको दृष्य देख्ने बित्तिकै बालिकाको मनमा लाग्यो । झट्ट प्रश्न पनि उब्जियो, सबैले एकै ड्रेस चैं किन लगाए ?
विद्यालयबाट एक्लै फर्किरहेकी थिईन् । मनको जिज्ञासा सोधिहाल्न साथमा कोही थिएन । भोलिपल्ट पनि स्कूल छुट्टी भएर त्यहि बाटो घर फर्किँदै थिईन्, उही दृष्य देखियो ।
त्यो दिनभने उनीसँगै दाजु पनि थिए । सोधिन्, यो के गरेको ? दाईले यो कराँते खेल सिकिरहेको हो भनेर खेलबारे जानकारी दिए ।
मुक्कामुक्की गर्ने खेल रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त झन् उनको मनमा जिज्ञासाको खात लाग्यो । कुट्ने पनि खेल हुने रहेछ ? यो खेल किन खेल्ने होला ? कसरी खेल्ने होला ? मैले पनि खेल्न पाए….. यावत प्रश्न दाजुले मेट्न सक्लान् भन्ने उनलाई लाग्दै लागेन ।
तेस्रो दिन उनले एक निर्णय लिईन् । आज जसरी खेल सिकाउने गुरुलाई भेट्छु । स्कूल छुट्टी भएपछि घर फर्किदा कराँते सिकाईरहेका मदन गुरुलाई भेटिन् ।
गुरुलाई भेट्ने बित्तिकै मनको प्रश्न एकाएक पोखियो, यो के सिकाइएको हो ? कसरी खेल्नु पर्छ ? मैले खेल्न हुन्छ कि हुँदैन ? यो खेलेपछि के हुन्छ ? लगायत अनेक प्रश्न सोधिन् । गुरुले पनि उनले बुझ्ने गरी जवाफ दिए ।
त्यसपछि उनलाई थाहा भयो, कराँते एउटा खेलको नाम हो । यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ । लगाब लगाएर खेल्न सक्यो भने जितिन्छ पनि । त्यसपछि उनलाई खेलतर्फ लगाब बढ्यो । कराँते खेलाडी बन्ने सपना देख्न थालिन् ।
यहि कुरा आमासँग भनिन् । बुबासँग पनि कराँते सिक्ने रहर सुनाईन् । तर उनी केटा थिईनन् । १२ वर्षे छोरी पो थिईन् । त्यसैले आमाबाबुले एकैस्वरमा भने, ‘कराँते त केटाहरुले खेल्ने खेल हो । केटीले खेल्न हँुदैन ।’ अनि उनका थप कुरा सुन्दै सुनेनन् ।
त्यहि समय जतिबेला कराँते छोरीको लागि होइन भनिएको थियो, उनको भाइले भने खेल्ने स्वीकृति पाएका थिए । सँगसँगै स्कूलबाट फर्किदा देखेको दृष्यले दिदीभाइ आकर्षित भएका थिए । तर, छोरी भएकै कारण परिवारबाट उनको रहरमा उत्साह थपिएन । उनीभन्दा २ वर्ष कान्छो भाइलाई भने कराँते खेलमा आमाबुबाले नै भर्ना गरिदिए ।
खेल सिक्न १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने रहेछ । आमाबुवाले छोरीले कराँते खेल्न नदिने भनेपछि पैसा दिने कुरै भएन । त्यतिबेला उनीहरुको घरमा पसल थियो । ति बालिकाको मनमा कराँते खेल्ने रहर नमेटिने गरि पसिसकेको थियो । त्यसैले उनले पसलको काउण्टरबाट अलिअलि गर्दै पैसा चोरेर १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन् । त्यहि पैसा बोकेर उनी कराँते सिक्न गईन् ।
छोरी भएकै कारण कराँते खेल्न अस्वीकार गरिएकी तिनै बालिका आज कराँते खेलकै कारण चर्चामा छिन् । आमाबाबुसँग लुकीलुकी कराँते सिक्न गएकी उनी ब्ल्याकबेल्ट हुन् । कराँते प्रशिक्षक अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी पनि । हो त्यति चुपचाप बिद्रोहले कराँतेमा स्थापित नाम हो – सञ्जु महर्जन ।
सञ्जु काठमाण्डौको सिनामंगलकी हुन् । उनी अहिले सञ्जु महर्जन कराँते प्रशिक्षक हुन् । उनको आफ्नै डोजो छ । उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा मेडल पनि प्राप्त गरिसकेकी छन् ।
मानिसलाई कुनै काममा स्थापित हुनको लागि भित्रदेखिको लगाव चाहिन्छ । सफल हुन निरन्तरको मेहनत । हो त्यहि मेहनतले आज सञ्जु कराँतेमा स्थापित छन् । उनले कुनै पनि खेल महिला वा पुरुषको लागि भनेर यो समाजले निर्धारण गरिदिएको बन्धन पार गरिन् । त्यसपछि त समाजलाई पनि उनको मेहनतलाई चुपचाप स्वीकार गर्न कर लाग्यो ।
सञ्जुले २०५२ देखि २०५६ सालसम्म कराँते सिकिन् । कराँते खेल्न लागेको ७ वर्षसम्म पनि आमाबाबुले राम्रो मानेका थिएनन् । छोरीले केटाहरुसँग मुक्कामुक्की खेल्ने काम उनीहरुलाई चित्त बुझेकै थिएन ।
सञ्जुले कराँते सिक्न थालेको ८ वर्षपछि काठमाडौंमा देस्रो पुनम स्मृती अन्तर्राष्ट्रिय कराँते प्रतियोगिता भयो । प्रतियोगितामा ६ देशको सहभागिता थियो । ६ देशका खेलाडीमा सञ्जु पहिलो भइन् ।
त्यसपछि मात्र उनका आमाबुवा खुसी भए । अनि उनलाई सहयोग पनि गर्न थाले । उनले २०५८ सालमा भएको गणेशमान स्मृती कपमा पनि उनले प्रथम हुदै मेडल प्राप्त गरिन् । २०७४ सालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वल्र्ड पिस कप प्रतियोगितामा समेत उनले मेडल प्राप्त गरिन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मेडल प्राप्त गरिसकेपछि उनलाई परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो । समाजले हेर्ने नजर बदलियो ।
कराँते खेलको प्रशिक्षक बन्न ९ चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । खेलाडीको सिकाईको आधार हेरि सेतो, पहेंलो, हरियो लगायत ९ वटा बेल्ट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्जुले यि चरण पार गरिसकेकी छिन् । उनी ब्ल्याक बेल्ट प्राप्त प्रशिक्षक हुन् । उनले प्रशिक्षकको रुपमा काम गर्दा मोरक्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाएकी छन् ।
हरेक व्यक्तिले आफ्नो पेशाका साथै परिवारको जिम्मेवारी निभाएकै हुन्छ । अझ महिलालाई त पेशागत जिम्मेवारीसाथै पारिवारिक जिम्मेवारीको दोहोरो भूमिका सँधैजसो हुन्छ नै ।
सञ्जुले पनि कराँते सिक्ने क्रममा नै विवाह गरिन् । उनले १८ वर्षको उमेरमा काठमाडौंकै मैतीदेवी घर भएका सुनिल महर्जनसँग विवाह गरेकी हुन् । उनको भागी विवाह थियो । उमेर नपुग्दै भागेर बिहे गर्दा परिवारले राम्रो मानेन् । आमाबुवा पनि रिसाए ।
बिहे गरेको १ वर्षमै सञ्जुले छोरी जन्माईन् । १९ वर्षमै आमा बन्दा उनलाई खेल क्षेत्र नै छोडौं झै नभएको पनि होइन । तर, उनको अन्तरहृदयले खेल क्षेत्रलाई यसरी अंगालेको थियो कि, उनले कराँते छोड्नै सकिनन् ।
उनले भनिन्, ‘श्रीमान, सासु, ससुरा सबै बुझ्ने भएकाले बिहे गरिसकेपछि मलाई खेल्न समस्या भएन । तरपनि घरको काम, गर्भावस्थामा पनि खेल खेल्न समस्या त हुने रहेछ नै ।’
६ महिनाको गर्भवती हुँदा पनि उनले कराँते सिकाउन नछोडेको बताईन् । तर श्रीमानले छोरी जन्मेपछि पनि रेखदेख गरिदिएकोले आफूले निरन्तरता दिन सकेको पनि उनको भनाई छ ।
अहिले उनकी छोरी १५ वर्षकी छिन्, छोरा ९ वर्षको । उनले भनिन्, ‘अब म पारिवारिक बोझमा छैन । देश, विदेश जान स्वतन्त्र छु ।’
खेल क्षेत्रमै विभेद
सञ्जुको नाम पछाडि विभिन्न पदहरु जोडिएका छन् । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहायक प्रशिक्षक, पाको नेपाल क्योकुसिन कराँते संघका अध्यक्ष, महिला हिंसा विरुद्धको आत्मरक्षा तालिमका मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा काम गरिरहकी छन् ।
यी पदसम्म पुग्नका लागि धेरै संघर्ष गरिन् । उनले खेल क्षेत्रमा पनि विभेद सहेकी छिन् । महिला खेलाडी र पुरुष खेलाडीबीच तलबमा विभेद छ । विभिन्न ठाउँबाट दिईने सम्मान, पुरस्कारमा पनि पुरुष नै प्राथमिकतामा पर्छन् ।
आफुलाई सिकाउने गुरुहरुले पनि केटी मान्छेलाई गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ । उनीहरुले कुरा गर्दा, खेल सिकाउँदा कुन तरिकाले गरिरहेका छन् त्यो पनि खेलाडी महिलाले नै बुझेर सजग हुनुपर्ने उनको अनुभव छ ।
उनी स्वयं पनि बेला बेला हिंसाको जोखिममा हुन्छिन् । कराँते सिकाउने गुरुले नै आफु माथि दुव्र्यवहार गर्न खोज्दा आफुले सिधै प्रतिकार गरेको अनुभव पनि सुनाईन् ।
हिंसाबारे थप भनिन्, ‘खेल सिक्ने, सिकाउने क्रममा देश, विदेश विभिन्न ठाउँमा जानुपर्दा पुरुष सहकर्मीसँग एउटै कोठामा बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो बेलामा आफु कसरी सुरक्षित रहने भन्ने स्वयं महिलालले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।’
आत्मरक्षा तालिमले महिलालाई फाईदा
अहिले सरकारले महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न भन्दै आत्मरक्षा तालिम सुरु गरेको छ । ३६ जिल्लामा पहिलो चरणमा तालिम भइसक्यो । सञ्जुले २ जिल्लामा प्रशिक्षण दिएकी छिन् ।
आत्मरक्षा तालिम महिला, किशोरी र बृद्धा महिलालाई पनि दिने गरिएको छ । यो तालिमले महिलालाई आत्मरक्षा गर्न सहज हुने उनको विश्वास पनि छ । यहि तालिम सिकेको दुई दिनमा एउटा किशोरी बलात्कार हुनबाट जोगिएको उदाहरण दिँदै उनले महिलाका लागि रक्षात्मक हुने बताईन् ।
पछिल्लो समय महिला आफन्तबाटै असुरक्षित भइरहेका छन् । बुवाबाट छोरी, छोराबाट आमा पनि असुरक्षित भएकाले पनि आत्मरक्षा तालिम महिलाको सुरक्षाको लागि आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ ।
उनले थपिन्, ‘आफुमाथि जबरजस्ती हुँदा अथवा कोही आइलाग्दा कसरी भाग्न सकिन्छ, कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने बारे जान्न महिलाले आत्मरक्षा सिक्न जरुरी छ ।’